Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Madaxweynaha Galmudug - Jowhar Somali news Leader
Home News Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Madaxweynaha Galmudug
Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Madaxweynaha Galmudug
Wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in lagu doorto magaaladaas labo Madaxweyne kadib markii uu khilaaf hareeyey doorashada Madaxweynaha iyo Madaxwene ku xigeenka Galmudug.
Ururka Ahlu Sunna oo hore dowlada federalka heshiis ay ka gaareen sidii loo afajari lahaa khilaafka ragaadiyay Maamulka Galmudug ayaa maanta ku dhowaaqay xildhibaano cusub oo uu yeelanayo Maamulka Galmudug iyadoo isla maantaba doortay guddoomiye Baarlamaan.
Xildhibaanadan oo tiradoodu gaareyso illaa 69 ayaa lagu biiriyay 20kii xildhibaan oo hore uga mid ahaa xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee dhowaan la dhaariyay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ee garabka Ahlu Sunna ayaa loo doortay Cabdiqani Salaad Ibraahin iyadoo lagu wado in si degdeg ah guddi doorasho loogu dhowaaqo isla markaana ay doortaan Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dhowr musharax ay doonayaan in ay ka qeybgalaan doorashada Madaxweynaha ee garabka Ahlu Sunna inkastoo aan la shaacin magacyadooda.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa caawa laga dareemaya jawi siyaasadeed oo ka bedelin kuwii hore,iyadoo hore dhowr musharax Madaxweyne ay uga soo horjeesteen guddiga doorashada Baarlamaanka Galmudug ayna shuruudo ku xireen ka qeybgalka doorashada.
Guddiga doorashada Baarlamaanka ay dowlada federalka aqoonsan tahay ayaa saddex jeer dib u dhigey xilliga qabashada codsiyada musharaxiinta Madaxweynaha Galmudug.
Hase yeeshee waxaa isa soo tareysa cabsi laga qabo in magaalada Dhuusamareeb lagu doorto labo Madaxweyne maalmaha soo socda.